ပန်းဂေါ်ဖီစေ့ထုတ်လုပ်သူများ - China Cauliflower Seed Factory & Suppliers
Broccoli Seeds F1 Hybrid အထွက်နှုန်း မြင့်မားပြီး လှပသော အစိမ်းရောင် ပန်းဂေါ်ဖီစေ့များ
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အချက်များ အမျိုးအစား- ပန်းဂေါ်ဖီအစေ့များ အရောင်- အစိမ်းရောင် မူရင်းနေရာ- Hebei, China အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: SXB No.1 မျိုးစပ်: YES အသီး အလေးချိန်: 700g ခန့် အရသာ- ...
ခရမ်းရောင် မျိုးစပ်ပန်းဂေါ်ဖီနှင့် ဘရိုကိုလီမျိုးစေ့များ စိုက်ပျိုးရန်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အချက်များ အမျိုးအစား- ပန်းဂေါ်ဖီ၏ မူရင်းနေရာ- တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: shuangxing မော်ဒယ်နံပါတ်: SX-ZH No.2 မျိုးစပ်မှု- YES အရောင်- ခရမ်းရောင် အသီးအလေးချိန်- 1 ကီလိုဂရမ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- Phy...
တရုတ်ပန်းဂေါ်ဖီအစေ့ SXCa No.2 ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစေ့
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား: ပန်းဂေါ်ဖီစေ့ အရောင်: အဖြူရောင် ပင်ရင်းနေရာ: Hebei, China အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: SXCa No.2 မျိုးစပ်: YES ထုတ်ကုန်အမည်: အဖြူရောင် ပန်းဂေါ်ဖီအစေ့ အသီးအလေးချိန်: 1000 ဂရမ်ခန့် ရင့်ကျက်မှုရက်များ: 80 ရက် အရသာ အရသာကောင်းမွန်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CIQ;CO;ISTA;ISO9001 ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် အဖြူရောင် ဘရိုကိုလီ ပန်းဂေါ်ဖီအစေ့ SXCa No.2 ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစေ့များ 1. အလယ်အလတ်ရင့်ကျက်မှု၊ ကူးပြောင်းမှုမှ ရက် 80 ခန့် ...
ပိရမစ်ပုံသဏ္ဍာန် အစိမ်းရောင် ပန်းဂေါ်ဖီစေ့ စပ်မျိုး ဘရိုကိုလီ အစေ့များ
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အချက်များ အမျိုးအစား- ပန်းဂေါ်ဖီအရောင်- အစိမ်းရောင် မူရင်းနေရာ- Hebei, China Brand Name: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: SXCa No.5 မျိုးစပ်: YES ရင့်ကျက်ရက်များ: 85-90 ရက် သန့်ရှင်းမှု-...
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း အစေ့လှလှ SXCa No.5
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- ပန်းဂေါ်ဖီစေ့ အရောင်- အစိမ်း ပင်ရင်းနေရာ- Hebei, China အမှတ်တံဆိပ်အမည်: shuangxing မော်ဒယ်နံပါတ်: SXCa No.5 မျိုးစပ်: YES ရင့်ကျက်ရက်များ: အစားထိုးစိုက်ခင်းမှ ရိတ်သိမ်းရန် ရက်ပေါင်း 85-90 ရက် ...
လိမ္မော် အဝါရောင် ပန်းဂေါ်ဖီစေ့ SXCa No.6
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- ပန်းဂေါ်ဖီစေ့ အရောင်- အဝါရောင်၊ လိမ္မော် ပင်ရင်းနေရာ- Hebei၊ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: SXCa No.6 မျိုးစပ်: YES ကုန်ပစ္စည်းအမည်- လိမ္မော် အဝါရောင် ပန်းဂေါ်ဖီစေ့ SXCa No.6 ရင့်ကျက်မှု- အလတ်စား ရင့်ကျက်မှု ဦးခေါင်း အလေးချိန် : 800 g အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CIQ;CO;ISTA;ISO9001 ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် လိမ္မော်ရောင် ပန်းဂေါ်ဖီအစေ့ SXCa No.6 1. နွေဦးနှင့်ဆောင်းဦးပေါက်ထွက်ရှိမှုအတွက် အလယ်အလတ်ရင့်ကျက်မှု၊ ရက် 80 ခန့်...